May 16, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 8
BOOSAASO(P-TIMES) – Ciidamada Puntland ayaa qabtay hub fara badan oo ladoonayay in laga soo dajiyo xeebaha gobalka Sanaag, gaar ahaana agagaarka deegaanka Ceelaayo, waxaana hubkas la xaqiijiyey in laga keenay dhinaca dalka Yemen, sida ay tilmaamayaan macluumad soo gaaraya Warsidaha Puntlandtimes.
Puntland, waxay dagaal kula jirtaa kooxaha Argagixisada ee Daacish & Al- Shabaab oo labaduba kusugan buuraleyda gobalada Barri & Sanaag, waxayna xooga saraan sidii ay u geysan lahaayeen ficilo kasoo horjeeda Amniga & daganaanshaha mandiqada.
Ilo Amni, waxay xaqiijinayaan in ay jiraan shabakado is biirsaday oo iskugu jira Soomaaliya, Yemen & Ajaaniib u dhalatay dalalka deriska la ah Soomaaliya oo doonaya in ay hub kala soo dagaan dhul xeebedka Badda dheer ee Soomaaliya, yoolkuna yahay in ay u gudbiyaan dalalka jaarka ah.
Iskaashi amni oo dhexmaray laamaha Amniga ee gobalka Geeska Afrika ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii looga hortagi lahaa kooxaha doonaya in ay dhibaateeyaan amniga guud ee gobalka, waxaana kooxaha Amniga kasoo horjeeda ay u muuqdaan kuwa iska kaashanaya sidii ay hub ku heli lahaayeen.
Ayax ibnu ayax says:
Amniga puntladn waa in laxoojiyaa hubkana baris xoogan lagu sameyaaa
Waxaan ku jirnaa
6 did waddaca
Majeerteen, Warsangali iyo Dhulbahante waa ul iyo diirkeed wey guuleysteen!100%
Hadalkaagu waa sax maxaa yeelay Majeerteen ayaa kor ka ilaalinaya dhulka Warsangali iyo Dhulbahante 100%?
Hubkaan Ethiopia ayuu u socday. Sirdoonka Ethiopia baa la socday kuna hagay in Puntland qabato. Waxyaabaha Dibiro loogu yeeray Addis bayna kamid tahay.
@ zode caaw adeer hooyaa akhlaaqda kaa ilowday afkaaguna waa uraya inangumeed inangumeed dhalay cuqdad u ildaran ayaad tahay. Puntland sirdoonkeeda ayaa ka horeeya kan geeska Africa oo dhan, inaad u quuri waydo libinta dad soomaaliyeed oo aad Amxaaro iyo Ethiopian la kadho waxay muujinaysa sida aad u tahay doofaar doofaar dhalay gun ah.
Hubkii horey Soomaaliya u yaallay ayaa dhib noogu filan, waa maxay kan hadda la soo wadaa ma dhibkii hore dhib ku darsadaa.